ChūnibyŌ Demo Koi ga Shitai! » ICT.com.mm
ICT.com.mm > Review > Gaming > ChūnibyŌ Demo Koi ga Shitai!
Jan 5, 2013 Nay Aung Latt
(အတိုကောက် – Chu2 သို့မဟုတ် ChūnibyŌ) ဟာ Clannad ၊ The Melancholy of Haruhi Suzumiya နှင့် K-On! တို့လို လူကြိုက်အများဆုံး Comedy နှင့် Slice of Life Animation Series များနှင့်အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းတွေကို အသားပေးထားတဲ့ Moe’ Anime ဈေးကွက်ရဲ့ ဘုရင်တစ်ဆူဖြစ်တဲ့ Kyoto Animationက ရေးဆွဲထားတဲ့ TV Series အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ChūnibyŌ Demo Koi ga Shitai!ဟာ 2010အတွင်းက Kyoto Animationကပဲ ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့ Kyoto Animation Award Competition ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Light Novel ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး 2011အတွင်းမှာ ဇာတ်လမ်း အစအဆုံး စာအုပ် နှစ်အုပ် ထွက်ရှိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် Animation ဇာတ်လမ်း ထွက်ရှိဖို့ကို ပရိသတ် စောင့်မျှော်လျှက်ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ 8th Grade Syndromeလို့ ဘာသာပြန် လို့ရမည့် ChūnibyŌ ဟာ အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ် အရွယ် 8th Grade အဆင့်ကျောင်းသားတွေ စတင် အရွယ်ရောက်ချိန် စိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲကာလမှာ ထင်ယောင် ထင်မှားတွေ တွေးတတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်ပုံကို အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
ChūnibyŌရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး အထက်တန်းကျောင်း စတင် တက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ Yūta Togashiဟာ ငယ်စဉ်အခါကလည်း 8th Grade Syndrome နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို RPG ဂိမ်းတွေနှင့် Fantasy ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို စွမ်းအားရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dark Flame Masterအဖြစ် လူတွေရှေ့မှာတောင် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မိမိငယ်စဉ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို မသိခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကြားမှာ သာမန်ဘဝနှင့် နေထိုင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်ကို မှော်မျက်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ အထင်မှားနေတဲ့ Rikka Takanashi အမည်ရ ကျောင်းသူလေးက Yūta ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကို မထင်မှတ်ဘဲ သိရှိသွားပြီး နောက်မှာတော့ Yūta ရည်မှန်းထားတဲ့ ကျောင်းသားဘဝအစား ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်များနှင့် ဆက်တိုက် ကြုံတွေ့ရပုံ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားပါတယ်။ Rikkaတို့ အဖွဲ့ထဲကို Yūta လိုပဲ ငယ်စဉ်အခါက စိတ်ကူးယဉ် ရောဂါ ထခဲ့ကြတဲ့ Shinka Nibutani နှင့် Rikka ရဲ့သူငယ်ချင်း Sanae Dekomoriတို့ ပါဝင်ရောက်လာပြီး မူလ Light Novel ဇာတ်လမ်းမှ ဇာတ်ကောင်တွေအပြင် Rikkaရဲ့အမ TŌka Takanashi လိုမျိုး ဇာတ်ကောင်သစ်တွေပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Animation Quality ကတော့ Kyoto Animation ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းတွေ၊ Yuta နှင့် Rikka တို့လို ဇာတ်ကောင်တွေ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ Fantasy Sequence ပိုင်းတွေကို ပြင်ပလောကနှင့် စိတ်ကူးယဉ်လောကကို နှစ်ခု တွဲပြီး ပြသထားတဲ့ အခန်းတွေက ကြည့်ကောင်းသလို၊ ရယ်လည်း ရယ်ရပါတယ်။ အခြေခံဇာတ်လမ်းနှင့် တစ်ချို့ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေကတော့ The Melancholy of Haruhi Suzumiya နဲ့ အနည်းငယ် ဆင်တူနေပေမည့် သီးသန့် High School Anime ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအနေနှင့် ခွဲထွက်နိုင်တာ တွေ့ရမှာပါ။ ChūnibyŌ Demo Koi ga Shitai!ဟာ 2012 အတွင်း ထွက်ရှိထားတဲ့ Comedy နှင့် Slice of Life Animation ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ကြည့်လို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အထူးခြားဆုံး ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။